Kuwait Inorambidza Vagari Vese Vasina Kuvharirwa Kubva Kunze kwekune dzimwe nyika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuwait Kuputsa Nhau » Kuwait Inorambidza Vagari Vese Vasina Kuvharirwa Kubva Kunze kwekune dzimwe nyika
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Kuwait Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuwait inorambidza vese vagari vasina kuvharwa kubva kune dzimwe nyika
Kurambidzwa kwegumbeze kuenda kune dzimwe nyika kune vese vagari vasina kubatwa kweKuwaiti vaziviswa nezviremera nhasi.
Vagari vemuKuwaiti chete vakabvumidzwa kuenda kunze kwenyika.
Kurambidzwa kwekufamba kunotanga kushanda muna Nyamavhuvhu 1.
Vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanobvisirwa mutemo mutsva.
Zviremera zveKuwait zvakazivisa kuti vachengeti veKuwaiti chete ndivo vanozobvumidzwa kuenda kunze kwenyika, zvichinyatso kumisa chikamu chikuru chevanhu vane mamirioni 4.2.
Iyo gumbeze kurambidzwa kwekune dzimwe nyika kune vasina kuvharirwa vagari vaziviswa nevakuru vakuru vehurumende yenyika yeGulf nhasi. Kutanga kubva Nyamavhuvhu 1, vachengeti chete ndivo vanobvumidzwa kuenda kunzira dzekune dzimwe nyika.
Nekudaro, vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu, vanhu vane mamiriro ekurapa anodzivirira kubaiwa, nemadzimai akazvitakura vachasunungurwa pamutemo mutsva uye vachabvumidzwa kufamba kana vawana chitupa chakakodzera kubazi rezvehutano renyika.
Kufamba kwacho kunogonesa chinzvimbo chakakura chehuwandu hwevaKuwait pasi pekurambidzwa kwekune dzimwe nyika. Zvinoenderana neazvino data, Kuweti yakapa inodarika mamirioni e2.3 madhizaini eECVID-19 majekiseni, aine vanhu vangangosvika miriyoni imwe kusvika parizvino - vanopfuura 22% yevagari - vanogamuchira mabara maviri.
Kunyange hazvo chiziviso ichi chaive chisina kunyatsojeka maererano nenyaya iyi, zvinoita sezviri kureva kuti vanhu chete vakabaiwa majekiseni chete ndivo vanobvumidzwa kufamba mushure mekunge danho ratanga kushanda mwedzi unouya.
Kubva zvakatanga denda iri, Kuwait yakanyoresa pamusoro pezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemakumi mana nenomwe dzevanhu veCOVID-394,000, nevanhu vangangosvika zviuru zviviri nemazana matatu vakafa chirwere ichi.